Iminyaka engama-75 emva kweMfazwe yaseStalingrad. Ezinye iincwadi ngaye | Uncwadi lwangoku
Iminyaka engama-75 emva kweMfazwe yaseStalingrad. Ezinye iincwadi ngaye
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Iincwadi, Izaziso, Inoveli
Hoy 2 ngoFebruwari zizalisekile Iminyaka engama-75 ukusukela ukuphela kweMfazwe yaseStalingrad. Kwaye abo kuthi banomdla IMfazwe Yehlabathi yesiBini, ungqingo nomzabalazo kweso sixeko IVolga Sesinye seziqendu zokuthatha isigqibo sexesha elibi kuLuntu olwalulolukhuphiswano.
Okwam kubaluleke ngokukodwa kuba, ukubhala enye yeenoveli zam, bendifuna ukufunda ezinye izinto. Yanele kum Imfazwe yaseStalingradngumbhali wenoveli kunye nembali uWilliam Craig. Kodwa ngaphandle kwamathandabuzo, ngumsebenzi we U-Anthony Beevor mhlawumbi eyaziwa kakhulu. Namhlanje ndijonga ezinye izihloko njengabameli njengezo Zaitsev, eyona sniper idumileyo yaseStalingrad, okanye leyo yomkhosi waseJamani UVon Paulus. Ixabiso njenge irhafu kunye nenkumbulo kule mihla intlekele.
UStalingrad (namhlanje IVolgograd) kwaye iya kufana nenye ye Amabutho amaninzi awaziwayo kunye nezigqibo zeMfazwe yesibini (II) yeHlabathi. Ngokunokwenzeka kunye naleyo ye- iikurks, ngoJulayi ka-1943, elona dabi lalikhulu kukhuphiswano, ngokuqinisekileyo uphawule umqondiso wemfazwe. Ngamawaka amabali kunye nabalinganiswa abaphambili, iimbali-mlando aziyi kuyeka ukusixelela malunga nayo kunye nemvelaphi yayo yeengcamango ziya kuqhubeka zingenasiphelo.
El cinema yemfazwe Ubeke imifanekiso kuyo amatyeli amaninzi, kodwa ndishiyeke kwezona zidumileyo: Utshaba kwiiGates (2001), Ukususela kwisiFrentshi UJean Jacques Annaud. Kudlala umlinganiso UJoseph Fiennes, uJude Law, uEd Harris kunye noRachel Weisz, uxelele intsomi malunga nokuqubisana phakathi kwabahlaseli UVasili Záitsev kunye no-Erwin König. Y IStalingrad, imuvi enzima kakhulu 1993Imveliso yaseJamani neyaseSweden, ebalisa ibali leqela lamajoni aseJamani kunye neentsuku zakhe zokugqibela ezoyikekayo esixekweni.
1 Ugqirha waseStalingrad-Heinz G. Konsalik
2 Iileta zokugqibela ezivela eStalingrad -Angaziwa
3 Mna no-Stalingrad-Friedrich Von Paulus
4 Izikhumbuzo zeSniper eStalingrad - UVasili Zaitsev
5 Imfazwe yaseStalingrad - uWilliam Craig
6 UStalingrad-Anthony Beevor
Ugqirha IStalingrad -U-Heinz G. Konsalik
Ibali liqala sele lingene 1943. Emva kokoyiswa kukaStalingrad, ugqirha wezomkhosi Fritz wonker ithathwa ngamaRussia kunye namakhulu amajoni kwaye athunyelwa ku inkampu yentolongo. Kwangoko ngo-1949 uBöhler kunye namaqabane akhe basazama ukusinda ekuthinjweni. Kodwa xa elinye lamabanjwa aseJamani lihlaselwa sisifo seappendicitis, uBöhler uthatha isigqibo sokubeka emngciphekweni utyando, oluza kuthi gqolo lube nzima imeko yakhe.
Iileta zokugqibela de IStalingrad - Ongaziwayo
En 1954 yapapashwa ngo Alemania le ncwadi eqokelele i iziqwenga zeeleta ezingama-39 ezibhaliweyo zaza zathunyelwa ngumkhosi waseJamani Ngemihla yokugqibela yedabi. Ngokwompapashi wale ncwadi, amagunya amaNazi athimba iingxowa zeposi ezisixhenxe zokugqibela ezazinokuhanjiswa. Imixholo yafundwa yaza yahlolisiswa kwaye oonobumba abaze bafike kwizongezo zabo.
Kodwa emva kweminyaka baphinda bavela kwi Oovimba bezomkhosi basePotsdam kwaye zafunyanwa ukuze zipapashwe. Kodwa kwafumaniseka ukuba bahlukile, ingezizo izinto zokukhohlisa, kodwa yayingengawo amaxwebhu ayinyani. Nangona kunjalo, njengobungqina obubhekele phaya kwinto ekunokwenzeka ukuba yayiyinyani Kwimfazwe yaseStalingrad.
Stalingrad kunye nam -UFriedrich Von Paulus
Ezi ziinkumbulo ze Umphathi kunye noMarshal Von Paulus, ophethe i-Sixth Army yaseJamani, eye yagqibela ngokunikezela ngemikhosi yayo eyayitshatyalalisiwe eStalingrad. Imalunga ne- ibali elingaqhelekanga oko kusinika iimpendulo ngokwembono yelungelo lokwenzekayo. Kwaye kunjalo uxwebhu lokuqala lwembali kwaye isisiseko, kodwa ikwayi-akhawunti eyahlukileyo ubomi bakhe bobuqu kunye nobomkhosi, kwaye ngaphezu kwako konke, ngeemeko ezazimphawule ngezo ntsuku zokuthatha isigqibo.
Izikhumbuzo zeSniper eStalingrad -UVasily Zaitsev
UVassili Zaitsev waye Umzingeli weUral onenjongo engagungqiyo kwaye oku kwabonakaliswa kwi-Battle of Stalingrad, apho, ngamazwi akhe, “wabulala AmaJamani angama-242, kubandakanywa ngaphezu kwabadubuli botshaba abalishumi ”. Le ncwadi yiakhawunti yobuqu ye- amava akhe emfazweni, yahluke kakhulu kuleyo iboniswe kwifilimu ka-Annaud ”. Ngale kaVon Paulus, libali lelinye icala, eliphumeleleyo, kodwa ikwangqina ngobundlobongela obuthathwe njengeyona mfazwe inegazi kwiMfazwe yesibini yeHlabathi.
Idabi laseStalingrad - UWilliam craig
Utshaba kwiiGates Usela kwiindawo kunye neziganeko ezichazwe kule ncwadi kaCraig. Sisiphelo somsebenzi onzima owawuqukayo iminyaka emihlanu yophando, ngexa umbhali wayetyhutyha amazwe abandakanyekayo, efunda amaxwebhu, esenza nodliwanondlebe nabaninzi abasindileyo. Iziphumo zisibonisa lkubuso bomntu obuninzi babalinganiswa bayo abaninzi kwaye yimizobo yeziganeko zokwenyani kunye nabalinganiswa abasuka kwintlekele enkulu abahlangabezana nayo.
IStalingrad -U-Anthony Beevor
Kusenokwenzeka incwadi edumileyo okanye eyaziwayo. Umsebenzi kaBeevor wanconywa ziingcali zembali kwaye waba umthengisi ogqibelele ngamazwe. Beevor wenza a uphando olunzulu koovimba baseRussia naseJamani, bekhupha kubo iileta ezivela kumajoni angaziwayo kunye nobungqina. Uye wancwina abasindileyo kuwo omabini amacala ukuze ahlaziye amava onke acace gca ngabo bonke abalinganiswa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » Iminyaka engama-75 emva kweMfazwe yaseStalingrad. Ezinye iincwadi ngaye
Ababhali aba-5 abenze imbali
Udliwanondlebe noVíctor del Arbol, uNadal Award 2016.